10 Ihe 8 Awa 2017 na CES XNUMX Kụziiri M Banyere Tech Echi | Martech Zone
Dị ka onye nzuzu, esonyeere m 165,000 ndị ọzọ na-ahụ maka nkà na ụzụ, ndị na-ere ahịa, ndị na-eme ihe ike, na ndị ọzọ na CES 2017 izu gara aga.
Cargbọ ala a nwere ubi na-akụtu
Eji m oge m niile na-ezute ndị mmadụ. Ma ọ bụ, n'ụzọ ziri ezi karị, na Lyfts, Ubers, na cabs na-akwado ndị njem Vegas na-aga n'okporo ụzọ m ịga zute ndị mmadụ. Mana edebere m awa asatọ maka ihe onye ọ bụla hụrụ teknụzụ n'anya kwesịrị ime ọ dịkarịa ala otu oge: ịwagharị n'ala ụlọ nzukọ ndị isi na CES, Ihe Ndị Ahịa Elektrọnik.
Kedu ihe ị hụrụ? See hụ echi.
Ma ọ bụ, kama, ọhụụ nke echi nke nwere ike ọ gaghị emezu.
Ọtụtụ ga-atụ anya na ọ bụghị, dị ka ndị ọkpọ na-agba ụzarị radiesị maka ụmụ nwoke, obere jeanshorts maka ụmụ agbọghọ na-ekpo ọkụ nke na-ama jijiji ịgwa ha ụzọ Google Maps chọrọ ka ha gaa, ma ọ bụ nke ọ bụla ise dị iche iche "smart" robot chọrọ ịbụ gị mebere enyi, anwụrụ, ma ọ bụ nnọchi ịrịba ama ndị ọzọ, karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-Japanese, na-eto eto, na nwoke.
Mana ịgagharị n'ala mere ka o doo m anya nke ọma na enwere ma ọ dịkarịa ala 10 mega-gburugburu na-emikpu ụlọ ọrụ ndị na-azụ ahịa.
Lee ha, na usoro ọ bụla.
1: Pet stof
Amaghị m ihe a sitere na ahụmịhe onwe m, mana o doro anya na anyị hụrụ anụ ụlọ anyị n'anya n'ezie. Na, anyị chọrọ n'ezie ka anyị ghara ịnọ nso ha.
Yabụ anyị chọrọ teknụzụ anụ ụlọ dị oke ọnụ nke na-enye anyị ohere ịzụrụ anụ ụlọ anyị nke ọma site na ngwa na ekwentị anyị. Anyị kwesịrị inwe mkparịta ụka vidiyo na ha ka ha mara na anyị hụrụ ha n'anya, ọ ga-alọta n'oge na-adịghị anya.
Ma ọ bụ ma ọ dịkarịa ala mgbe feeder na-akpaghị aka na-apụ Kibbles & Bits.
2: Smart ụlọ gbachiri
Na mmemme tupu "CES" Pepcom "ebe ndị na - eme ihe ngosi na-akwụ ụgwọ karịa nwere ike ịpị ngwongwo ha iji pịa nri agụụ na-agụ site na nri n'efu na ụmụ okorobịa, ụmụ nwanyị mara mma na uwe ndị nwere obi ụtọ na kọleji (anaghị m eto gị), ahụghị m ihe pere mpe karịa ise enwere ike isii, ma ọ bụ ikekwe ụlọ ọrụ asatọ nwere mkpọchi amamịghe.
Nke a bụ smartwatch nke na-adịghị ka smartwatch…
Enweghị m ike ijide n'aka ọnụ ọgụgụ ahụ ruru ọnụ ọgụgụ Corona n'efu nke ndị na-ahazi n'ike wụsara akpịrị m.
N'ọnọdụ ọ bụla, igodo dị nso na mbibi, ikekwe, nke dị mma n'ihi na ike anaghị apụ apụ n'obodo m. Ma anyị ga-enwe ike inye ndị bịara abịa mebere igodo a na-achịkwa ngwa yana njikwa ohere oge iji kpochaa ụlọ anyị, tụfuo ngwa ahịa na ọrụ, na égbè site n'ihe anyị nwere.
3: oche ịhịa aka
Ndị nta akụkọ maara ihe niile banyere oche ịhịa aka na CES. Oge a, agara m ihe mbụ n'ụtụtụ, tupu e kwe ka ndị mmadụ na-eme mkpọtụ n'ọnụ ụzọ ámá.
Ezi ihe abụọ gbasara oche ịhịa aka n'ahụ: ha na-adị ọnụ ala (chee $ 3,500, ọ bụghị $ 7,000), ha na-akawanye mma, ha na-amalitekwa imezi ihe nke yiri ka ọ nwere ike dabara adaba n'ụlọ gị n'ebughị ụzọ mee gị ngụkọta jerkoff.
(Ee, ama m na nke ahụ bụ atọ, mana Corona enweela mmetụta na-adịgide adịgide. Sue me.)
Jiri nlezianya gụọ akụkụ ikpeazụ ahụ. "Malite" iji nweta styling na "dị ka" ọ "nwere ike" n'ezie agaghị eme ka ị dị ka jerkoff. Na ndị ọzọ okwu: bụghị nnọọ n'ebe ahụ. Ihe dị mma gbasara ụdị styling a dara: ọ ga-azọpụta gị puku kwuru puku.
4: 4K na 8K TV
O doro anya na 4K bụ nkà na ụzụ magburu onwe ya, ana m atụ anya ịzụta ya mgbe ọdịnaya m nwetara n'aka onye na-eweta satịlaịtị m, Netflix, Youtube, iTunes, na isi mmalite ndị ọzọ na-akwado ya oge niile.
Aga m ewere 5
(Ma mgbe m nwere ike iyi ya n'ụlọ m na-enweghị nbudata ya n'abalị ahụ.)
Mana 8K dị mma karịa 4K. Ugboro abụọ ka mma, dị ka ị maara ma ọ bụrụ na ị kacha mma na mgbakọ na mwepụ. (N'ezie 4X ka mma, ma ọ bụrụ na ị dị egwu na mgbakọ na mwepụ.)
Ekpebiri m na m na-akwado 98 ″ 8K TV nke m hụrụ na Samsung's gargantuan CES. Ọnụ ego ahụ bụ $ 400,000, mana enweghị m nchegbu banyere nke ahụ, n'ihi na ndị oligarchs Russia na ndị VC na-akwado Silicon Valley Series B ga-azụta ego iji kwalite mmepe ngwaahịa nke ga-ewe ọnụahịa gbadaa ọtụtụ iwu ịdị ukwuu n'ime afọ ise na-esote.
Ka ọ na-erule n'oge ahụ, ọdịnaya 4K nwere ike ịbụ na ọ ga-abụrịrị ma ọ dịkarịa ala obere oge ụfọdụ, na enwere m ike ịzụta doodad ọzọ iji kwụnye TV iji bulie ya na 8K na "enweghị oke ogo ogo."
5: Drones na-eme ihe n'ezie
N'afọ gara aga CES gosipụtara drones. Na drones. Na ndị ọzọ drones. N'afọ a, ọ dị nnọọ iche.
A na-acha odo odo na CES. Nke a anaghị eme ihe ọ bụla (belụsọ ofufe)
A ka nwere drones, na drones, na ndị ọzọ drones. Ma drones ndị a na-eme ihe. Ma ọ dịkarịa ala na vidio ndị edepụtara nke ọma na obere-retouched site na ndị nrụpụta a na-achọghị iche.
Ahụrụ m drones na-eme ihe nkiri vidio. Drones agbụrụ ahụ. Drones ị nwere ike gbaa. Ndị agha drones. Orderkèala patrol drones. Ọrụ ugbo drones na ịgba ọgwụ anwụ anwụ ma naanị na gburugburu ebe obibi-mma ụzọ. Drones ndị na-eburu akụkụ ọhụrụ site na ndị nwụrụ anwụ gaa ụlọ ọgwụ ebe achọrọ ha. Na drones na-anapụta pizzas mgbe agụụ na-agụ gị, umengwụ, na enweghị mmasị na nri siri ike.
Na mgbakwunye, n'ezie, egbe na-egbu egbu.
Adị na-agba ama ma na-eme kwa ụbọchị - dịka ọmụmaatụ: imirikiti ọrụ gị. Eziokwu gbara ume na-ada ụda nke ọma, nke mebere eziokwu dị mma, na ụdị eziokwu dị iche iche na-agwakọta ụwa kachasị mma.
Lee, Ma, ana m efe flying
Ha atọ gosipụtara ọtụtụ ihe na CES 2017, jiri igwe okwu VR dị ọnụ ala karịa ndị na-enye gị ohere ijide ekwentị gị dị ka sentimita asatọ na ihu gị wee hụ otu esi eme ka ihe ngosipụta nke nkọwapụta dị elu karịa ụlọ ọrụ VR nke ga-eme lanarị ruo mgbe ihe ngosi nke afọ ọzọ.
Mana ndị ọrụ Zeiss fọrọ nke nta ka ekwenye na Apple iPhone 8 ga-emewanye eziokwu.
7: Ikuku ihe niile
Waya niile, ndị na-ahụ maka nkà na ụzụ na-egosi na ha ekwubila, ga-anwụ. Nke a bụ ozi ọma nye m, dịka onye nwe mpako nke PlayStation VR nwere wires karịa Apollo 13.
Eluigwe na ala na-enye ma eluigwe na ala na-ewere, agbanyeghị, ma ugbu a, batrị dị ezigbo mkpa.
8: Smart ihe niile
Amamịghe echiche bụ ihe ọhụrụ “niile eke,” onye kwuru na nso nso a, ma o doro anya na ndị niile gadget ahịa nwetara ozi n'otu oge, pre-CES.
Ihe niile dị mma, ihe niile agbakwunyere AI, na ihe niile na-amụ oge niile ka esi enyere gị aka karịa obere mmụba dabere na ojiji. Iwu ọhụrụ gafere na Congress, na enweghị ngwaahịa ọ bụla - ntutu isi, ụlọ mposi, na iko gụnyere - enwere ike ịmalite ịmalite na-enweghị ọnụ ọgụgụ nke ihe mmetụta, redio, igwefoto, ibe, yana, n'ezie, ngwa jikọtara na-achịkwa ha niile.
9: mkparịta ụka onye ọrụ ihu
Dị ka anyị niile maara, ịdọrọ ekwentị, nyochaa onwe gị, ịchọta na imeghe ngwa, na ilele ihuenyo gị, dị nnọọ 2016.
Mygbọala m na Google dị ka, ezigbo buds
Na 2017, anyị na-agwa teknụzụ anyị.
Ma ya, n'ezie, na-agwa anyị okwu.
N'ezie, Amazon ikwughachi ihe karịrị otu afọ, n'ezie, mana 2017 bụ afọ ọ ga-agbawa, ya na ọnụọgụ nke "nka," ma ọ bụ obere ngwa ọdịnala nke ọ na-agba, na-agbago naanị otu izu nke CES. Na Cortana, Viv, Google Assistant, na ee, nne nne Siri, anyị nwere ọdịnihu dị mkpa nke mkparịta ụka mkparịta ụka na-aga n'ụzọ anyị.
10: Akpukpo bu eziokwu maka nti
Igosi anya ihe na-abụghị ezigbo ya bụ otu ihe. Mana ọ dịghị mma ịhapụ ịhapụ, ntị ewepụtala kọmitii na-eme ndọrọ ndọrọ ọchịchị iji hụ na a na-asọpụrụ ikike ha.
Ezigbo eziokwu maka ntị bụ ihe dị na CES, ma n'eziokwu, ọ bụ nnukwu ihe.
Ndị na-emepụta ihe na-ewepụta ụdị ikuku nke AirPod nke na-ajụ oyi karịa ngwa ịnụ ntị nna gị, ma hapụ gị ka ị na-ahọrọ ụda iwe - dị ka olu nwunye gị. Ikpokọta ndị a na mebere na abawanye eziokwu ekweisi, na n'oge na-adịghị anya ị ga-enwe ike ijikwa uche nzacha na-enye gị ohere ịkpụzi eziokwu ka ọ bụla ị chọrọ ka ọ bụrụ.
Yabụ, dị ka Facebook eziokwu gị afụ, ma ọ ka mma.
Ma… M ka hụrụ tech
Ọ na-atọ ụtọ ịkọ egwuregwu na ngwaọrụ ọhụrụ na CES. Ma iji kpọrọ ihe maka naanị otu oge, ọ ga-aka atọ gị ụtọ ịgagharị n’ala ma ju gị anya maka ụdị ngwaọrụ dị iche iche ndị mmadụ na-arọ nrọ.
Na ịmara n'ụzọ ụfọdụ, n'ụzọ ụfọdụ, ụfọdụ n'ime ndị a ga-abụ isi na ọdịnihu na-adịghị anya.
Tags: 20174k igwe onyonyo4k igwe onyonyo8k igwe onyonyo8k igwe onyonyoaiarCESces 2017onye ahịadronesNgwalas vegasoche massaemrịzụ teknụzụanu uloezi uloụlọ mara mmaTechnologyoluvrwireless
John Koetsier bụ onye nta akụkọ, onye nyocha, na ọdịnihu. Dị ka Mobile Economist na akụ, M na-ebu amụma ma nyochaa ọnọdụ ndị na-emetụta ụmụ anụmanụ na ekwentị mkpanaaka. M na a odeakụkọ, nyocha, na ụlọ ọrụ Executive, na nwere chronicled ịrị elu nke mobile aku na uba. Tupu m banye na TUNE, wuru m VB Insight research team na VentureBeat ma jikwaa otu ndị mepụtara ngwanrọ maka ndị mmekọ dịka Intel na Disney. Na mgbakwunye, Etuola m ndị ọrụ aka, wuru saịtị mmekọrịta na ngwa mkpanaka, ma jụọ maka ekwentị, mmekọrịta mmadụ na ibe, na IoT Na 2014, akpọrọ m na Folio si n'elu 100 nke ụlọ ọrụ mgbasa ozi "ọtụtụ ndị ọchụnta ego ọhụrụ na ahịa shaker-elu." M na ezinụlọ m bi na British Columbia, Canada, ebe m na-azụ baseball na hockey, ọ bụ ezie na ọ bụghị n'otu oge ahụ.
Kedu ihe bụ Ngwa-Akụkụ Ngwaọrụ (DSP)?
Jenụwarị 14, 2017, elekere 12:46 nke abalị
Ndewo john ọ bụ akụkọ na-enye nkọwa.
Jenụwarị 14, 2017, elekere 5:10 nke abalị
Daalụ! Atụrụ m anya na ọ tọkwara ụtọ 🙂
Jenụwarị 15, 2017, elekere 10:51 nke abalị
Nkà na ụzụ na-agbanwe ụwa. Kwere na anyị na-atụ anya izute ezigbo terminators. Otu ihe atụ kachasị mma bụ Google, ka nchọta nchọta semantic ha si eme ka ajụjụ ọchụchọ dịkwuo mkpa. Otu mmụta igwe si arụ ọrụ dị mkpa n'ịghọta ka gị na ndị mmadụ na-emekọ ihe na ime mkpebi dabere na ya. Emeela m ajụjụ ọnụ nke ọkachamara na-achọ Semantic David Amerland, Ozugbo ebipụtara ya, m ga-eme ka ị mara. N'ajụjụ ọnụ ahụ David kọwara n'ụzọ doro anya ka ọchụchọ si emetụta.
Na-atụ anya ịnụ nghọta gị!